September 4, 2021 - Achawlaymyar
လူတိုင်းအတွက် အရေးပါလွန်းတဲ့ မျက်နှာအသားရည်ဟာ ကြည်လင်လှပနေဖို့လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အစပ်အချဉ်ကြိုက်လွန်းပြီး မိတ်ကပ်တွေ နေ့စဉ်လိမ်းလွန်းတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့အသားရည်ဟာ ပိုပြီး ပျက်စီးလွယ်သလို အဖုအပိတ်တွေလည်း များလွန်းလှပါတယ်။ ဒီလို အဖု ပိတ် တွေများပြီး အသားရည်ပျက်စီးလေ အ ပေါ်က နေမိတ်ကပ်တေ ွနဲ့ဖုံးအုပ်လေဆိုရင်တော့ ပိုပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတာပဲ အဖက်တင်မှာပါ။ ဆိုတော့ အရေးကြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအသားရည်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Skin Care လုပ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် မိတ်ကပ်တွေနဲ့အ ပေါ်ယံဖုံးထားစရာမလိုပဲ နဂိုတိုင်းကောင်းမ ွန်တဲ့ Skin ကိုရရှိမှာပါ။ အဖုပိတ်တွေနဲ့ ဗျစ်ထူ မျက်နှာအသားရည်ကြီးဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်… (၁) ဆိုင်တိုင်းမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့မုန့်ဖုတ် ဆော်ဒါ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါမုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ ကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ Skin Care အတွက်သိပ်အကျိုးရှိတဲ့ဆရာကြီးပါပဲ။ မပါမဖြစ် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကိုခန္ဓာကိုယ် အသားရည်ဘယ်နေရာမဆိုနဲ့ မျက်နှာပြင်ကိုပါလိမ်းပြီး Skin Care ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ … Read more
သင့်ချစ်သူက သင့်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တာလား ထိန်းချုပ်နေတာလားဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက် (၈) ချက်
ဂရုစိုက်တာနဲ့ လိုက်ပြီး ထိန်းချုပ်ခြင်းတွေရဲ့ကြားမှာ စည်းလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုကြားထဲက မတူညီခြင်းကို ကောင်းကောင်း သိသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်တာတွေ၊ ပြောဆိုတာတွေက သင့်အတွက် မွန်းကျပ်လာပြီ ဆိုကတည်းက သင်ထိန်းချုပ်ခံနေရပြီလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအချက်တွေက ထိန်းချုပ်နေလဲ ဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁။ ကိုယ်ကပဲ အမြဲတမ်း အရှုုံးပေးနေရတယ်။ သင်ဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ဖို့အတွက် သင့်ချစ်သူနဲ့ တိုင်ပင်ပေမယ့်လည်း သူကလက်မခံဘဲ သူ့အကြံကိုသာ လက်ခံရမယ်လို့ ပြောနေရင်တော့ ချစ်သူကောင်းတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်ချစ်သူကောင်း တစ်ယောက်ကတော့ သင်ပြောပြတဲ့ အကြံဉာဏ်ကို လက်ခံပြီးတော့ မှားနေရင်လည်း မှားတဲ့နေရာကို ထောက်ပြပြင်ပြပေးမှာပါ။ သင်ပြောတာကို လက်မခံ အကြံလည်းမပေး သူပြောတဲ့အတိုင်းသာ အတင်းအကျပ် လုပ်ခိုင်းတယ် ဆိုရင်တော့ သင်ဟာသူ့အမိန့်နဲ့ အသက်ရှင်နေရပါပြီ။ … Read more
သင့်လက်ရှိ အချစ်ရေးက သင့်အတွက်စစ်မှန်တဲ့ အချစ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက်များ
သင့်လက်ရှိ အချစ်ရေးက သင့်အတွက်စစ်မှန်တဲ့ အချစ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက်များ လောကကြီးမှာ အချစ်စစ်မှန်ရင် ပျော်ရွှင်မှုတွေချည်းပဲလည်း မဟုတ်ဘူး၊ အဆင်မပြေမှုတွေကိုလည်း မလွဲမသွေကြုံရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အရာအားလုံး ပြီးပြည့်စုံတာမျိုးတော့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အချစ်ကြောင့် ဘဝကပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုများလာတာမျိုးပဲ ပိုဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အချစ်ကြောင့် စိတ်ညစ်တာ၊ စိတ်ပင်ပန်းတာတွေပိုများနေရင် အဲ့ဒါက အချစ်စစ် မဟုတ်နိုင်ပါဘူးနော်။ (၁) အရာရာ တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်နေတာအချစ်စစ်မဟုတ်ဘူးချစ်တယ်လို့ ပါးစပ်ကတဖွဖွပြောပေမယ့် လက်တွေ့မှာကိုယ့်အတွက်မစဉ်းစားပေးတာ၊ ကိုယ့်အတွက်မကြည့်တာ၊ တစ်ဖက်ကအမြဲသည်းခံပြီး၊ တစ်ဖက်ကအမြဲအနိုင်ယူနေတာမျိုးကို စစ်မှန်တဲ့အချစ်လို့မဆိ ုနိုင်ပါဘူး။ အချစ်စစ်ဆိုတာက နှစ်ဖက်မျှတမှု ရှိပါတယ်။ (၂) အောက်ကျို့တောင်းပန်နေရတာ အချစ်စစ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ဖို့၊ ကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားပေးဖို့၊ ကိုယ့်အတွက်ကြည့်ပေးဖို့အောက်ကျို့တောင်းပန်နေရတာမျိုး၊ မလုံခြုံတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေတာမျိုးက အချစ်စစ် မဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်စစ်က ဂရုစိုက်ဖို့တောင်းဆိုစရာမလို၊ အောက်ကျို့နေစရာမလိုဘဲ၊ လုံခြုံတဲ့ခံစားမှုကို ဖြစ်စေတာမျိုးပါ။ (၃) အမြဲတမ်းငိုကြွေးနေရတာအချစ်စစ်မဟုတ်ဘူး အချစ်ကတခါတရံသင့်ကိုဝမ်းနည်းစေပေမယ့် အမြဲတမ်းတော့ … Read more
ေက်ာင္းမတက္ဘဲ လမ္းမွားေလၽွာက္ကာ PDFထဲေရာက္ေနတဲ့ လူငယ္ေလးမ်ားကို ျပန္ေခၚၾကရန္ တိုက္တြန္းလာတဲ့ ေဇာ္မဲလုံး
လမ္းမွားေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းမတက္ဘဲ PDF ထဲေရာက္ ရွိေနသည့္ လူ ငယ္မ်ားရဲ့ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ့္သား သမီးမ်ားကို ခ်စ္ရင္ ျပန္ေခၚ ၾကပါရန္ ထို႔အတြက္ အေရး မယူေၾကာင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ဟု ဒုတိယ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူ ထားသည့္ ေျပာခ်င္ရာ ေျပာ ေဇာ္မင္းထြန္း မွ ယေန႔ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္ ေဇာ္မဲလုံးရဲ့ ယခုလို ေျပာၾကားခ်က္ အေပၚကို ျပည္သူမ်ားရဲ့ ျပန္လည္တုံ႔ ျပန္မႈကေတာ့ လမ္းမွားေရာက္ လမ္းေပ်ာက္ ေနတာက မအလနဲ႔ နင္ဟဲ့ ေဇာ္မဲလုံးရဲ့.. ေသြး႐ူး ေသြးတမ္း ျဖစ္ၿပီး ကေယာင္ကတမ္းေတြ ေလၽွာက္ေျပာမေနနဲ႔ သိပ္မၾကာေတာ့ဘူး ငါတို႔ အလွည့္ ေရာက္ေတာ့မွာကို သိေနလို႔ … Read more
လူအမ်ားက ေဝဖန္ေျပာဆိုေနတာေတာင္ Tik Tokမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကျပေနတဲ့ ေနျခည္ဦး(ရုပ္သံ)
September 4, 2021 September 4, 2021 by Achawlaymyar
လူအမ်ားက ေဝဖန္ေျပာဆိုေနတာေတာင္ Tik Tokမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကျပေနတဲ့ ေနျခည္ဦး ေနျခည္ဦးဆိုသူကေတာ့.. ေအာင္ရဲလင္းရဲ႕ ခ်စ္သူအျဖစ္အေနနဲ႔ လူသိမ်ားလာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ မ်က္ႏွာမွာရွိေနတဲ့အမာ႐ြတ္အတြက္ အလွေတြျပင္ျပရင္း သူမကိုယ္သူမ Beauty Blogger တစ္ေယာက္အ.ျဖစ္ သတ္မွတ္လာခဲ့ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြရင္ထဲမွာေတာ့ Beauty Blogger ကဝင္းမင္းသန္းတစ္ေယာက္ပဲ ေလာက္ သူမကို မခ်စ္ၾကတာ သူမ မသိရွာပါဘူး။ သူမရဲ႕ အေဖက စစ္တတပ္ထဲက ဗိုလ္ႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ..အေဖျဖစ္သူရွာထားတဲ့ ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ သုံးျဖဳန္းျပေနသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနျခည္ကေတာ့ အေကာင္းစား ပစၥည္းေတြကိုသုံးထားႏိုင္သူျဖစ္တာေၾကာင့္ဆ.ယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္ေလးေတြေရွ႕မွာေတာ့ …အားက်စရာမင္းသမီးေလးတစ္ပါးလိုျဖစ္ေနေပါတယ္ေနာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနျခည္ဦးဟာ မၾကာေသးမီကမွ သူ႔ရဲ႕ Fan Group ေတြထဲမွာ ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာၿပီး ပရိတ္သတ္နဲ႔ ျပန္လည္ ထိေတြ႕ခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ စစ္သား သားသမီးျဖစ္တဲ့… ေနျခည္ဦးဟာ “ေဖေဖ … Read more
အိမ်ဘေးက သစ်ပင်ပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ ဧရာမ မြွေကြီးနှစ်ကောင်
အိမ်ဘေးက သစ်ပင်ပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ ဧရာမ မြွေကြီးနှစ်ကောင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေ့စဉ်တိုင်း အလွယ်တကူ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ပုံမှန် တိရစ္ဆာန်တွေများစွာ ရှိသလို တစ်ခါမှတောင် မမြင်ဖူး တဲ့ ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ အကောင်တွေလည်း များစွာရှိပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ဒီလို ထူးထူးဆန်းဆန်း တိရစ္ဆာန်တွေကို တောတောင်တွေ နယ်ဘက်တွေထဲမှာ အများဆုံးတွေ့ကြရပါတယ် ။ အခုလည်း ကျောက်ဆည်ဘက်မှာ နေတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးက သူရဲ့ အိမ်အနီးနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင် အပေါ်မှာ ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ မြွေကြီး နှစ်ကောင်ကို တွေ့ခဲ့တာကြောင့် ဗဟုသုတ အနေနဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ် ။ မြွေ က မြင်နေကျပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ အကောင်လည်း အတော်လေးကြီးတာကို ပုံထဲမှာ တွေ့ရမှာပါ ။ … Read more
ဝိတ္ခ်ေနေပမယ့္ ဝိတ္ျပန္တက္လာရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း (၇)ခ်က္
ဝိတ္ခ်ေနေပမယ့္ ဝိတ္ျပန္တက္လာရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း (၇)ခ်က္ ဝိတ္ခ်ဖို႔ႀကိဳးစားေပမယ့္ ဝိတ္ပိုတက္လာက တကယ္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္စရာပါပဲ။ အစားေလွ်ာ့စားတာက ဝိတ္က်ေစေပမယ့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရင္းေတြေၾကာင့္ ဝိတ္တက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ၁။ ေလ့က်င့္ခန္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာကလည္း ခဏတာ ဝိတ္တက္လာေစပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီး ဝိတ္တက္လာတာက ေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္ရလာေတာ့မယ့္ လကၡဏာတစ္ခုပါပဲ။ ေလ့က်င့္ခန္းေတြက ႂကြက္သားတစ္ရႉးေတြကို ဖ်က္စီးလိုက္ၿပီး ႂကြက္သားေတြကို ပိုသန္မာလာေအာင္၊ ပိုႀကီးထြားလာေအာင္ ျပဳျပင္ေပးလို႔ပါ၊ ၂။ Yo-yo dieting အစားကို အလြန္အကြၽံေလ်ာ့စားတဲ့နည္းျဖစ္တဲ့ Yo-yo dieting ကလည္း ဝိတ္ျပန္တက္ေစပါတယ္။ ဒီနည္းက ၅ ႏွစ္အတြင္း ဝိတ္ျပန္တက္လာေစပါတယ္။ ခႏၶါကိုယ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားခ်င္ရင္ေတာ့ Yo-yo dieting ၿပီးရင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာ၊ ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္နည္းတဲ့ အစားအစာေတြ ေလွ်ာ့စားတဲ့နည္းနဲ႔ ဆက္ၿပီး ဝိတ္ခ်လို႔ရပါတယ္။ ၃။ … Read more
၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၄)ရက္ေန့မွ(၆)ရက္ေန့ထိ မိုးေလ၀သခန့္မွန္းခ်က္
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့် ရှိနေပါသည်။ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ နေပြည်တော်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း)တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ မုတ္တမကွေ့၊ မွန်-တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် (၃၅)မိုင်အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ ကျန်မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ မုတ္တမကွေ့၊ … Read more
သူ ကိုယ့္အေပၚ အခ်စ္ေတြ ေလ်ာ႔လာျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား…
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချိန်မပေးတာတွေ များလာတဲ့အခါကျရင် ဆက်ဆံရေးတွေဟာ သွေးအေးသွားတတ်ပါတယ် ။ မအားလို့ . အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့. gameဆော့နေလို့. videoကြည့်နေလို့ . အဲ့လို မအားတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ များလာတာနဲ့အမျှ သိထားရမှာတစ်ခုက တစ်ဖက်က ကိုယ့်အပေါ် စိတ်တွေ ပြောင်းလဲသလို ဖြစ်လာနေပြီဆိုတာပါပဲ။ သံယောဇဉ်မပြတ်တဲ့သူကတော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူအတွက် မရမက အချိန်ပေးပြီး ပြေးလာတွေ့နေအုံးမှာပါပဲ။ မိုင်ပေါင်းများစွာ ကွာနေတဲ့ ခရီးကိုတောင် ဖြတ်သန်းပြီး ကိုယ့်ဆီကို လာနေအုံးမှာ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း အချစ်တွေလျော့လာပြီဆိုရင်တော့ မအားဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ပစ်ထားတတ်တယ်။ အရင်လို သတိတရ messageတွေ ပို့ထားတာတွေ မရှိတော့ဘူး။ ဖုန်းလေးဆက်ဖို့အရေး video callလေး ခေါ်ဖို့အရေးမှာ တောင် ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့ နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့ပေါ့။ သွေးအေးလာရင် အဲ့လိုပါပဲ။ … Read more